‘सलुट’ यी नै हुन् ! ४० जना सङ्ग एक्लै ल’डेर नारीको ई’ज्जत जोगाउने एक नेपाली (गोर्खाली) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/‘सलुट’ यी नै हुन् ! ४० जना सङ्ग एक्लै ल’डेर नारीको ई’ज्जत जोगाउने एक नेपाली (गोर्खाली)
काठमाडौँ / गोर्खाली अर्थात नेपाली भन्ने वित्तिकै हिम्मत, साहसको कुरा पहिला आउँछ । एउटा घटनाले भारतका जनता नेपालीलाई बारम्बार सम्मानका शब्द पुकारिरहेका हुन्छन् । पर्बत जिल्लाको बाच्छा गाउमा जन्मी माथि गोर्ल्यांग गल्छिना र तल बाच्छाखोला हुँदै काली गङ्गा सम्मका पाखा पखेरा खोच खन्तेरा हरुसँग हाँस्दै खेल्दै पिरती गास्दै देउराली खोला हुदै कडेनी साँघु मुनि र भुतेको दहमा पौडी खेल्दै बाच्छा गाउको रमाइलो बाताबरण संगै हुर्किनु, भएका युबा बिष्णु श्रेष्ठको नाम भारतियहरुले भुल्नै सक्दैनन् ।।*** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
जसको नामले सिंगो नेपालकोपनि शीर उचो भएको छ । नाम रोशन भएको छ । जो एक्लै मध्यरात घना जंगलमा यात्रुबाहक रेलभित्र ४० डाकासँग एक्लै भिडेर कैयौंको जिउधन जोगाएर बहादुरी मात्र देखाएनन् । केही चेलीहरुको इ’ज्ज’तपनि बचाए । उनी बहादुर बीर गोर्खाली सेना हुन् । बिष्णु श्रेष्ठ जो भारतीय सैनिकमा कार्यरत छन् । बाच्छा हुँदै कर्मथलोको भारतीय सैनिक भर्ति हुन पुगेका बिष्णु हाल पोखराका स्थायी बासिन्दा हुन् ।
विष्णु श्रेष्ठ त्यस्ता बहादुर हुन् जो भदौ १७ गते मध्यरात राँची–गोरखपुर रेलयात्राका क्रममा डाँका समूहसँग एक्लै भिडे, एउटै खुकुरीको भरमा। तीन डाँका मा’रिए, लु’टिएका लाखौं मूल्यको धनमाल फिर्ता भयो। श्रेष्ठले धेरैलाई जीवनदान मात्र दिएनन्, बाबुआमाकै सामुन्ने डाँ’का समूहबाट बला’त्कृ त हुन लागेकी युवतीको इज्जत पनि जोगाइदिए।*** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****